Nhau - Chinhu Chaunofanira Kuziva Nezve Imbwa Dzako Paws
Kune zvipembenene zveziya mumakumbo embwa yako.
Imbwa dzinoburitsa ziya pazvikamu zvemiviri yavo isina kuvharwa nehuswa, semhino uye mapedhi etsoka. Mukatikati meganda pagumbo rembwa mune gland gland - kutonhora imbwa inopisa pasi. Uye sevanhu, kana imbwa ichivhunduka kana kushushikana, yavo paw pads inogona kunge yakanyorova.
Paw Mapedhi ari epingi kana ari imbwa
Imbwa dzembwa dzinowanzo pingi kana dzichinge dzazvarwa, Kana dzikakura, ganda rekunze remapeche avo rinowedzera kuomarara, paws inozochinja kuita nhema. Kazhinji, imbwa 'paws musanganiswa wepingi uye mutema madonhwe pavanenge vari pamwedzi mitanhatu yemakore Izvi zvinoreva kuti paw yavo mapedhi ari kuramba achiomarara, kuti vagone kufamba zvakanaka uye kumhanya chero kupi.
Kucheka Zvipikiri zvake
Kana nzara dzembwa dzichibaya padzinofamba kana kubatwa nyore, iye ari kuda kuti dzigerwe. Nzara dzinofanira kutenderera pasi, unogona kutenga chipikiri clipper kune imbwa yako. Mazhinji maveti anopa sevhisi iyi kana muridzi asingazive kuzviita pachavo. Iro bvudzi riri pakati pepaw pads rinokonzeresa kukwirisa kana risina kugurwa nguva dzose. Iwe unogona kukamura vhudzi kunze uye kutema kuti ivo vatove nemapads. Tarisa matombo kana mamwe marara uchicheka.
Licking kana kutsengaing tsoka dzavo
Kana imbwa yako ikananzva makumbo avo, anogona kunge achishupika kana kunetseka maitiro sekushushikana. saka anonanzva padhi yake kuti asunungure manzwiro ake. Kuderedza kufinhwa, edza kutora imbwa yako kufamba kwakawanda, kumhanya, kana nguva yekutamba newe uye nedzimwe imbwa kuti ushandise simba rakawanda repfungwa nemuviri. Mupe zvakachengeteka zvekutsenga tambo matoyi kuti abvise pfungwa yake kure kubva pamakumbo ake.
Yakatsemuka kana yakaoma mapads
Kana ganda rembwa yako rikaoma, dambudziko rakajairika mukutonhora kwemamiriro ekunze kana kudziyisa kwepakati kuchidzikisira hunyoro mumba, mapedhi ake anogona kutsemuka nekukora. Kune akawanda akachengeteka, ezvekutengesa zvigadzirwa zviripo.